Shabeellaha Hoose: Qoysas horey ugu ceyrtoobay abaar oo xoolo loo qeybiyay - Radio Ergo
(ERGO) – Boqol iyo todobaatan qoys oo ahaa xoolo-dhaqato beeraley barakac ah ayaa lixdii Maarso helay xoolo ay dhaqdaan. Qoysaskan oo deggan xeryo ku yaalla magaalooyinka Marka, Baraawe iyo Qoryooley ayaa deeqdan ka helay urur maxalli ah si ay uga baxaan nolosha barakaca.
Xaliimo Caddaawe Abiikar oo ku nool xerada deegaanka Ceeljaalle ee duleedka magaalada Marka ayaa qoyskeeda la siiyay shan ari ah oo afar dhedig yihiin, si la mid ah qoysaska kale.
Haweenaydan oo ahayd xoolo-dhaqato hore ayaa sheegtay in xoolaha ay u baahan yihiin in loo sabro sanado badan laakiin ay aaminsan in nolosha barakaca ay uga bixi karto xoolaha tirada yar ee toban sano ka dib ay heshay.
“Xoolahaas ayaan la guuraa. Dhibkaan waan ka baxaa haddi illaahay ii badiyo.”
Qoyska Xaliimo oo xerada yimid sanadkii 2011 ayaa afartii sano ee u dambeysay ku tiirsan shaqooyin xoogsi ah. Waxay iyadu u shaqo tagtaa xeebta magaalada Marka oo dhagaxyada guryaha lagu dhiso ay ka soo uruuriso. Halkii gaari oo ku dhowaad bil ku qaata ayay ka heshaa $30.
Xaliimo oo ah hooyada labo carruur ah ayaa xustay in sidoo kale carruurta aabbahood uu ka shaqeeyo sameynta nuuradda oo maalmaha uu shaqada helo ay ka soo gasho $3. Waxay nooga warrantay sida hadda ay u maareeyaan nolosha qoyskeeda.
“Shaqadeenna wax kale ma aheyn annaga baddaas ayaan maalintii nolol maalmeedkeena ka soo dhacsanaa. Nimanka raga ahna nuuriyad ayay shitaan. Nolol maalmeedka waan ka helnaa.”
Xaliimo ayaa ariga la siiyay ku darsatay qoys ay daris yihiin oo ay u joogaan carruur xoolaha u ilaalin karta kuwaas oo ku foofiya dhul daaqsimeed duleedka xerada ah.
Ariga la siiyay ayey u soo iibisaa cows, sidoo kale waxa ay siisaa buunsho ay ka hesho qoysas aan xoolo dhaqan oo xerada deggan. Arrintan ayay sheegtay in ay uga hortageyso in xooluhu ka caatoobaan, madaama Jiilaalka dartiis aysan helaynin calaf ku filan.
“Xoolahaas in la dhaqaaleeyo oo gacanta lagu haayo ayey rabaan. Xoolaha ilmo deriska ah ayaa ii daajiya aniga wiillal waa weyn ma qabi. Hadda jiilaal waaye markuu roobku da’o waa laga dhaafaa buunshaha.”
Xaliima oo qoyskeedu lahaa 160 neef oo ari ah iyo labaatan lo’ ah waxay ka soo barakaceen miyiga deegaanka Siinay oo hoostaga degmada Marko ee gobolka Shabeellaha hoose.
Deeqdan oo uu bixiyay ururka Jubba foundation waxaa maalgaliyay ururka caalamiga ah ee Mercy Corps sida uu sheegay Yarow Maxamed Cabdi oo ah maamulaha mashruucan.
Yarow ayaa tilmaamay in qoysaska ka faa’ideystay ay qiimeeyaan baahidooda iyagoo kaashanaya maamulka gobolka Shabeellaha hoose iyo odayaasha bulshada, si loo helo dadka nugul ee ku haboon.
Wuxuu xusay in shuruudaha lagu xushay ay tahay in ay yihiin xoolo-dhaqato hore, una diyaarsan in xoolaha la siiyo ay uga faa’ideysataan sida loogu talagalay oo dhaqasho ah. Yarow ayaan weydiinnay wuxuu beddeli karo barnaamijkan iyo hadafka ay ka leeyihiin.
‘’Hadafka laga lee yahay waxa weeyaan in dib u kabid lagu sameeyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa, si ay uga soo kabtaan xoolihii ka dhamaaday iyo abaarihii soo maray.”
Mashruucan ayaa socon doonno illaa bisha shanaad ee sanadkan. waxaana ka faa’ideysan doona 340 qoys oo la siinayo 1,700 oo neef oo ari ah.
Yarow ayaa xusay in saddex qoys ay iibsadeen xoolihii dhaqashada loo siiyay, wallow uu xusay in tallaabadaas aysan ahayn hadafka loo bixiyay xoolaha. Baaritaan hay’addu sameysay ayay ku ogaadeen in arrintaas ay salka ku hayso durruufo nololeed oo soo wajahay qoysaska.
“Waa ruux liita masaakiin ah waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay cunno degdeg ah. xoolihii waa gadayaa, Xoolihii maxaad u gadday markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay ninyahow deyn baa la igu leeyahay. Dadka qaar waxay ku leeyihiin beertii baa xilligeedii la gaaray wax qarash ah oo aan ku fasho ma haysto.”
Bashiir Abdikariim Xaaji Mamow oo ah aabbaha afar carruur ah oo 2017-kii abaar ay ka laysay shan lo’ ah oo uu ku dhaqanayay deegaanka Ceelcadow oo hoostaga magaalada Marka ayaa qoyskiisa oo deggan xerada ceeljaalle wuxuu hadda dhaqdaa xoolaha la siiyay.
Bashiir oo ariga ay u raacdo gabar uu dhalay oo 17 jir ah ayaa qorsheynaya in marka uu roob da’o uu ku dhaqdo tuuladii ay abaarta ka soo barakicsay, si xooluhu u helaan calaf ku filan iyo dhul ku haboon.
Wuxuu tilmaamay in halkaas uu ku lahaa beer labo saac ah oo roobka ku baxda taas oo sidoo kale uu doonayo inuu ku tacbado masago iyo digir ay reerku raashiin ka dhigtaan horraanta guga la filayo inuu bilowdo bisha Abriil.
“Ariga wuxuu rabaa dhul baadiye ah oo lagu raaco oo cows leh, marka in tiisa la raaco waa lagu qasbanyahay.”
Abaaro ku dhuftay Soomaaliya sanadadii 2011 iyo 2017-kii ayaa ceyrteeyay kumannaan qoys oo ku nool gobolka Shabeelaha hoose, kuwaas oo ahaa xoolo dhaqato beeraley.